Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Air Canada ikulungele ukuphumeza umgaqo-nkqubo omtsha wokugonya
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Isibhengezo sikaRhulumente waseCanada sokuba abasebenzi abalawulwa ngumanyano kwicandelo lezothutho kufuneka bagonywe ngokupheleleyo kwi-COVID-19 nge-31 ka-Okthobha ka-2021.
Urhulumente waseCanada ubongoze ukuba aqhubeke nokwamkela iingcebiso zepaneli yeengcebiso ze-COVID-19.
I-Air Canada ikhuthaze kwaye yaqhubeka ngokwamkela amanyathelo asekwe kwisayensi ukugcina abathengi kunye nabasebenzi bekhuselekile.
I-Air Canada izibophelele ekusebenzeni nemibutho yabasebenzi kunye noRhulumente wase Canada ukuphumeza lo mgaqo-nkqubo mtsha.
I-Air Canada namhlanje ikhuphe le ngxelo ilandelayo ukuphendula isibhengezo sikaRhulumente waseCanada sokuba abasebenzi abalawulwa yimanyano kwicandelo lezothutho kufuneka bagonywe ngokupheleleyo kwi-COVID-19 nge-31 ka-Okthobha ka-2021.
Ukusukela oko kwaqala ubhubhane, iAir Canada iye yaxhasa kwaye yaqhubeka nokuthatha amanyathelo asekwe kwisayensi ukugcina abathengi kunye nabasebenzi bekhuselekile. Oku kubandakanya ukukhuthaza abasebenzi bayo ukuba bagonywe, baseke iiklinikhi zasemsebenzini kunye nokuxhasa iinkqubo zokugonya zoluntu ukwenza ukuba izitofu zifikeleleke ngokubanzi.
Nangona Air Canada ilinde ezinye iinkcukacha malunga nesibhengezo sanamhlanje malunga nogonyo olunyanzelekileyo, linyathelo elamkelekileyo eliya phambili kumanyathelo okusombulula ukukhusela impilo kunye nokhuseleko lwabasebenzi beenqwelo moya, abathengi kunye nabo bonke abantu baseCanada.
I-Air Canada izimisele ukusebenza nemibutho yabasebenzi kunye Urhulumente waseKhanada ukumilisela lo mgaqo-nkqubo mtsha ngendlela efanelekileyo ngenjongo yokwandisa ukhuseleko nokulungelelanisa ukusetyenziswa kwamanyathelo ezempilo nezokhuseleko asekwe kwisayensi ngendlela ehambelana nengxelo kaRhulumente ye-COVID-19 yoVavanyo kunye noVavanyo lweeNgcebiso zePhaneli yeNgcali yeNgcebiso kaMeyi 5, 2021.
Ngokukodwa, kubahambi, iphaneli yacebisa: ukuba kungabikho vavanyo lwangaphambi kokumka kubahambi abagonyo ngokupheleleyo; Ukuvuma ukuba ukuvavanywa kokuhamba kunye nokufika kugqithisile kwaba bakhweli; kwaye uvavanyo olusebenzayo oluzenzekelayo olukhawulezileyo lwe-antigen olukhoyo ngoku lunokuthatha indawo ekhuselekileyo kunye nexabiso eliphantsi lokuvavanya i-PCR kuvavanyo lwangaphambi kokuhamba.
I-Air Canada nayo ihlala izinikele kuphuhliso oluqhubayo kunye nokusetyenziswa kwamanyathelo okhuseleko amatsha kunye neenkqubo ezisebenzayo nezilungele abathengi njengoko zifumaneka. Amanyathelo anjalo abalulekile ekuqalekeni okukhuselekileyo kwemveliso yezothutho lomoya, ngaphandle kokwenza ukuba abantu baseKhanada bahambe ngokukhululekileyo, ikwangumqhubi obalulekileyo wemisebenzi yezoqoqosho eCanada.
IBhabheli isayina izivumelwano ezitsha zokuzisa ukulawulwa kwehlabathi ...
47 IiFlights ngoSuku olunye lwe Montego Bay
IsiCwangciso esitsha seHlabathi seMinyaka elishumi yokuSebenza kuKhuseleko eziNdleleni